Easter Message 2014. - Catholic Church Myanmar
Easter Message 2014.
posted Apr 14, 2014, 6:23 PM by Myanmar Signis [ updated Apr 14, 2014, 6:37 PM ]
Let me begin withalittle story. Around the year 1921 inasmall Catholic (Christian) village there wasavillage celebration of Easter. Many non-catholics joined with their relatives and friends. Suddenly an old woman,anon-catholic died. She was loved by the villagers and all were her friends and many were related to her.
A question arose: Where should she be buried? It was Roman Catholic territory and church law forbade any but baptized Roman Catholics be buried in the consecrated ground ofaCatholic cemetery -- and that was the only cemetery around. Where would she be buried? Finally, though, it was settled, the decision was made by P.P. that she was to be buried just outside the cemetery fence. So it was done. During the night, however, the Parish Priest and three Catholics, moved the fence so that it would include the grave of their beloved old lady inside the sacred ground.
For those of us in Myanmar, resurrection is not justadogma or an act of faith. We went through our way of the Cross for the last five decades. Our way of the Cross did not end inaday, it stretched to 50 long, cruel years.
The Roman Empire was rattled by the stories and the Good News ofaroaming preacher, Jesus and chose to nail him on the cross. Similar fate awaited thousands of our young men and women who asked fora'morsel of justice'. Hundreds died on the cross. Conflict welded with injustice and made this nationavirtual hell. We wereaGood Friday people, withoutahope of Holy Saturday and Easter wasadistant dream.
· land grabbing by the cronies and the companies,
· Collective religious hatred fanned by the fire of hate speech by neo Nazi movements,
· the arrogant march ofaheartless neo liberal economy,
· continued conflict and displacement in ethnic community areas and
·asinister 'sentir' economy that favors the rich and the powerful.
“God was in Christ reconciling the world to himself and has given us the ministry of reconciliation” Christians haveaspecial duty for reconciliation. Easter bestows on each one of us to carry on this message of reconciliation. St Paul says "God gave us the ministry of reconciliation" (2Cor 5:18 The whole message of reconciliation is centered around the love of God and the death of Christ. Paul reminds us that "God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us" ( Rom 5:8 ) We rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation ( Rom 5:11)
This week Myanmar people celebrate the Holy Thingyan festival. This is the season of rejoicing. This is season of reconciling for our people. Foraweek an explosion of fun and frolic the rich and the poor, the high and the low, the ruler and the ruled, the Burmese and non Burmese will be spraying the gift of life, water on one another as brothers and sisters. This feast isafeast of reconciliation even during the times of dictatorial rules. It is coincident that Easter week falls on the same week affirming the enduring universal mission of reconciliation. Both the water festival and Easter point towardsanew creation,anew humanity cleansed of all sin and hatred.
·Personal Reconciliation : The lent ends with forty days of holy observance. During these forty days we commemorate seminal events in the bible. Christ who came to save all of us was himself tested by evil in the desert for forty days. (Mathew 4) We are asked to cleanse ourselves from our tendency to sin. As Paul struggled with law of flesh and law of spirit (Rom 7,8) we are struggling with good and evil. Sin crouches at the door waiting ( Gen 4:8) to destroy us. This creates fractured relationship and anxiety. We are called to mend our relationship with God as the prodigal son did with his father. It is the time to return to God.
·Reconciliation in the family : We areacommunity. We worshipaGod who lives in community as Father, Son and the Holy Spirit. The most challenging life today is the family life and its lifelong commitment to one another. Genesis blessed the marriage with the glorious words " They are not two - but one" (Gen 2:14). Today's world has challenged the families. Every Easter brings the hope that disunited families seek reconciliation and derive inspiration from the Holy Family.
·Reconciliation with one another especially with the enemies : " Love your enemies and do Good to those who hate you" (Mt 5:38-42) the radical message of Jesus inspired thousands including Gandhi, Martin Luther King Jr and leaders from our own nation. St Paul exhorts us that we all are the same body of Christ. Hope springs forth in the heart of every Myanmar citizens as the government and the ethnic groups are in cease fire and arrive at draft resolution for the conflicts raging in this nation for the last six decades.
·Reconciliation among communities in Myanmar : St Paul reminds are that we are all part of the mystical body of Christ, each one forming the different parts of the body. (I Cor 12:12-30). “We are brothers and sisters” of this great nation. Without this attitude there can be no peace in the world, says Pope Francis. The binary configuration of this nation's history with the Bama majority claiming all rights and challenging others to the status of nothing has wrought wars, conflict and unbearable suffering for all. The risen Christ broughtasingle message " Peace be with you" (Lk 24:36). Pope Paul contextualized Christ's perennial message saying : "If you want peace, work for Justice". Justice is in short supply in ethnic areas. For the Common Good all stakeholders need to address justice issues. The God of the old testament and the God of the resurrection base their domain on Justice. Return to Justice and Return to reconciliation in this nation of 135 community. Diversity is dignity. Respect and Reconcile.
·Reconciliation with Creation. Foranation that is blessed with all natural resources, the sixty years sawaworst kind of rape of our resources. As the neo liberal economy explodes in the company of cronies, asapeople and nation we are to guard our resource - water, forests and lands. We need to be reconciled with the God's creation.
Christ reminds us of our awesome responsibility: just as he has reconciled us to himself by forgiving us, we are to go and seek reconciliation with those who have sinned against us. We, following God's example, are to forgive those who have hurt, troubled, and wronged us! Just as God took the initiative to forgive us - we are to take the initiative to forgive others. God expects us to forgive them in our hearts and to let them know it by the way we show it in our lives. We are to begin treating them with love as though they had never done anything against us. Reconciliation with our neighbor is the direct result of our forgiveness. There can be no genuine reconciliation without genuine forgiveness.
But the more I thought about it, the more palatable and the more gripping the idea became. Practice being God. Listen to verse 16: "From now on, therefore, we regard none fromahuman point of view; even though we once regarded Christ fromahuman point of view, we regard him thus no longer." He was talking about practicing being God -- not viewing persons fromahuman point of view, but fromaGod perspective. And when we have that perspective, the ministry of Reconciliation follows.
So when are we most like Christ? We are most like Christ when we are doing what He did in his extravagant gift of love on Calvary -- forgiving. Humanity marches on men and women who rebuil
In short this is my Easter message: to call for more religious tolerance in Myanmar, adding thatapositive approach to promoting religion is needed. The religious leaders must preach the goodness of their own religion in order to attract them. "Preaching the goodness of one’s religion, or holiness of one’s religion, should be emphasized, rather than attacking the other religion. If we have respect for the other religions, we promote our own religion. Unity in diversity is our destiny. Diversity is dignity – notadanger. We all belong to this great nation”
Myanmar’s destiny is Peace and Prosperity. Let us Celebrate the diversity of this rainbow nation.Choose life!
+ Archbishop Charles Bo,
၂၀၁၄ ခုနှစ်ဆရာတော်ကြီးချားလ်စ်ဘို၏ ပါစကား သတင်းကောင်း
ပုံပြင်တိုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အစပြုပါရစေ။ ၁၉၂၁ခုနှစ်၊ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ရွာ ကလေးတစ်ရွာမှာ ပါစကားပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် မဟုတ်တဲ့အခြားဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေလည်း ပွဲတော်မှာ ပါဝင် ခဲ့ကြတယ်။ ရုတ်တရက် ဘာသာဝင် မဟုတ်တဲ့အသက်ကြီးကြီး အဖွားအိုတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်။ ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးက သူမကိုရင်းနှီးချစ်ခင်ကြတယ်။ လေးစားအားကိုး ကြတယ်။
ပြဿနာကြီးတစ်ခုက “သူမကိုဘယ်နေရာမှာမြေမြှုပ်သဂြိုလ်ကြမလဲ’’ ကက်သလစ် အသင်းတော်ဥပဒေအရ ဆေးကြောခြင်းခံပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ သန့်ရှင်းရာ ကက် သလစ်သင်္ချိုင်းမြေမှာမြေမြှပ်ခွင့်ရတယ်။ ရွာအနီးနား တ၀ိုက်မှာ တခြားသင်္ချိုင်း မရှိဘူး၊ သင်္ချိုင်းကဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။ “သူမကို ဘယ်နေရာမှာမြေမြှုပ်ဘ သဂြိုလ်ကြ မလဲ” နောက်ဆုံးသူမကို သင်္ချိုင်းရဲ့ ခြံစည်းရိုး အပြင်မှာမြေမြှပ်ဖို့ ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမြှပ်ခဲ့ကြတယ်။ ညအချိန်ရောက် တော့ ဘုန်းတော်ကြီး နဲ့ရွာသားသုံးဦးဟာ သင်္ချိုင်းရဲ့ခြံစည်းရိုးကို အပြင်ဘက်ချဲ့ ရွေ့လိုက်တယ်။ အဖွားအိုရဲ့ ဂူလေးဟာ သင်္ချိုင်းမြေထဲရောက် သွားတယ်။
ဒါဟာ ခရစ်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန်တွေလုပ်ကြရမယ်။ ဘာတွေကို လုပ်ကြမလဲ စည်းတွေကိုရွှေ့၊ နံရံတွေကိုဖြိုချကြရမယ်။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင် ကိုယ်တိုင်လောကကြီးကို ပြန်လည်ငြိမ်းချမ်း သင့်မြတ်စေခဲ့တယ်။ ဒီအမှုကို ဆက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကိုထမ်းဆောင်စေလိုပါတယ်။ ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ဟာ မိမိရဲ့ လက်တော်ကို ကမ္ဘာတ၀ှမ်းဆီဆန့်တန်းပြီး ချစ်ခြင်းနဲ့ပွေ့ဖက်တယ်။
ဒီတစ်ပတ်မြန်မာပြည်သူ/သားတွေခါတော်သင်္ကြန်ကိုကျင်းပကြတယ်။ အင်မတိ၊ အင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဆရာတော်ကျောင်းကွင်းကနေ လည်းချောင်းပြီး လမ်းပေါ်သွားလာ သူတွေကိုရေပက်ပြီး၊
တော်ဝင်သင်္ကြန်ကျင်းပတယ်။ သင်္ကြန် ဆိုတာ ကူးပြောင်းခြင်း
နှစ်ဟောင်းအညစ်ကနေ နှစ်သစ်အသစ်ကိုကူးပြောင်း တယ်။ ရန်သူကနေမိတ်ဆွေ တပါးသူအေးချမ်းစေဘို့ မေတ္တာရေစင် သွန်းလောင်း ပေးတယ်။ တပတ်လုံး ရယ်စရာ၊ ရွှင်စရာ ကစားကြ၊ မြူးဆော့ကြ။
ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံး ညီအစ်ကိုမောင်နှမစိတ်ရင်းနဲ့ အသက်ရေကိုပက်ဖျန်းကြတယ်။
ဒီသင်္ကြန်ပွဲဟာမိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့ပွဲ။စစ်အစိုးရအချိန်မှာကော နှစ်စဉ်ကျင်းပစမြဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီနှစ် Easter Paschal ပွဲနဲ့ သင်္ကြန်တပတ်ထဲ ဆုံပြီး(၂)ဘက် စလုံးက အထူး ဘာသတင်းပြောချင်သလဲ။ ဒို့ဟာမိသားစုကြီး တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ရန်အမုန်းများ ပယ်ရှားပြီး ပြေလည်ပြီ။ မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီ ဆိုတဲ့သတင်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ခါတော်သင်္ကြန်ပွဲနဲ့ Easter ပွဲ၂ခုစလုံးက ဒို့ကိုလူအသစ် အပြစ်နဲ့အမုန်း တရားများမှ ကင်းတဲ့ သူတော်ကောင်းများ ဖြစ်ကြပြီလို့ကြေငြာနေတယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ အဖြစ်အသစ်မွေးဖွါးကြပြီ။ ၂၀၁၄ဟာမြန်မာ ပြည်သူ/သားတွေအတွက် အရေးပါ အဓိပ္ပါယ်ရှိဆုံး သတင်းဖြစ်တယ်။
ဒို့လူသစ်များဖြစ်လို့ ရှင်ပေါလူးဟာ အထူးဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းတယ်။
“မည်သူမဆို သခင်ယေဇူး၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တ၀ါဖြစ်၏။ဟောင်းသော အရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ ဘုရား သခင်သည် ယေဇူးအားဖြင့်ငါတို့၏ ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့် မိတ်ဿ ဟာယ ဖွဲ့စေတော်မူ၏။
၀ါတွင်းရက်(၄၀)ကို ကိုယ်ကျင့်တရားပြုပြင်ပြီး ဆုတောင်း၊၀ါရှောင်ခဲ့ကြပြီ။ ကျွန်ုပ် တို့ရဲ့ ကယ်တင်ခြင်းသမိုင်းကို အကျဉ်းချုပ်လေ့လာခဲ့ကြပြီ။ ဒို့ကိုလာ ကယ်ဆယ်တဲ့ သခင်ယေဇူးကိုယ်တိုင်တောကန္တာရထဲမှာ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ (မာတေဦး၎) အပြစ်ရဲ့ကျေးကျွန်မှလွတ်မြောက်ဘို့ ဒို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ရှင်ပေါလူးကိုယ်တိုင် ၀ိညာဉ်ပကတိနဲ့ ဇာတိပကတိ လွန်ဆွဲသလို ရုန်းကန်ခဲ့တယ်။ ဒို့လဲပဲ အကောင်းနဲ့ အဆိုး တောင်နဲ့မြောက် ကဒိမ်းကဘား ရုန်းကန်နေဆဲ ဖြစ်တယ်။ မကောင်း အဆိုးအပြစ်ဟာ ဒို့ကိုဖျက်စီးဘို့ တံခါးဝမှာစောင့်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ပဲဘုရားနဲ့ ဒို့- ဒို့နဲ့ဒို့အချင်းချင်း မိတ်ဆွေပျက်ပြားခဲ့တယ်။ ဘုရားရှင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုကို ပြန်လည်ရရှိဘို့ အိမ်ကထွက်ခွါသွားတဲ့ သားလေးလိုပဲ အဖဆီကိုပြန်လာဘို့ အချိန်ဖြစ်တယ်။ It is the time to return to God.
ဒို့ဟာ အဖွဲ့အစည်းမိသားစုနဲ့နေကြတယ်။ ဒို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာလဲ၊ခမည်းတော်၊ သားတော်- ၀ိညာဉ်တော်အဖွဲ့နဲ့စံပယ်တဲ့ ဘုရားဖြစ်တယ်။ ဒီခေတ်မှာ စိန်ခေါ် ခံရဆုံးဟာ အိမ်ထောင်မိသားစုဖြစ်တယ်။အသက်ထက်ဆုံး အတူတူနေဘို့ ပဋိညာဉ် သစ္စာဆောက်တည်ရတယ်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာ အကြင်လင်နဲ့မယား ကို ကောင်းကြီး မင်္ဂလာပေးထားတယ်။ ထိုသူ ၂-ဦးတို့သည် တသားတကိုယ်တည်း ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ (ကမ္ဘာဦး ၂း၂၄) ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာအိမ်ထောင်မိသားစုများကို စိန်ခေါ်နေတယ်။ ပါစကားပွဲသည် ကွဲပြားနေသောမိသားစုများ အတွက်
မျှော်လင့်စရာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ကျေအေး ဘို့ဖြစ်တယ်။
- အချင်းချင်းကျေအေးရုံမက- ရန်သူများနဲ့လည်း ကျေအေး "သင်တို့၏ ရန်သူများကိုချစ်ကြလော့။ ကိုယ်ကိုမုန်းတီးသောသူတို့ကိုအကျိုးပြုကြလော့။ (မာတေဦး ၅း၄၄)
Gandhi, Martin Luther King နဲ့ ကိုယ်နယ်ကိုယ်မြေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ခွန်အားဖြစ်စေတယ်။ ဒို့အားလုံးဟာ သခင်ယေဇူးရဲ့ တခုတည်း သောခန္ဓာကိုယ်၊ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်တယ်။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတိုင်း မျှော်လင့်ချက် ကိုယ်စီနဲ့တမ်းတနေကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၆၀) ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း စစ်အစိုးရတပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုစစ်ပွဲများ ပြီးဆုံးတော့မယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူစာချုပ် မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အရေးကြီးပါတယ်။
No Peace no progress
No peace no democracy
No progress no democracy
မြန်မာပြည်ရှိအသင်းအဖွဲ့များ ကျေအေးနိုင်ခြင်း ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးထဲမှာ ဒို့အားလုံးဟာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြတယ်။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ မိသားစု စိတ်ဓါတ်မရှိရင် ကမ္ဘာကြီးမှာ ငြိမ်သက်ခြင်းလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ ရဟန်းမင်း သူတော်မြတ Francis က မြွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဗမာလူမျိုးများသာ အစစအရာရာပိုင်ဆိုင်ခွင့် စိုးပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကျန်ရှိ တိုင်းရင်းသားများ စိုးစံရပိုင်ခွင့် မရှိခဲ့ရသည့်အတွက် ပြည်းတွင်းစစ် ပဋိပက္ခနဲ့အားလုံးအတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်။
ရှင်ပြန်တဲ့သခင်ယေဇူးက သတင်းဆန်းလေးတစ်ခုယူလာတယ်။ “Peace be with you” (LK 24;36)
ရဟန်းမင်းသူတော်မြတ် ဆဌမမြောက်ပေါလူးပြောတဲ့စကားတခွန်းရှိတယ်။ ကျွှန်ုပ်တို့ နဲ့ကိုက်ညီပါတယ်။ ငြိမ်သက်ခြင်းလိုချင်ရင် တရားမျှတမှုရှိဘို့ကြိုးစားပါ။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုငယ်လေးတွေ
နေထိုင်ရာနေရာများမှာ တရားမျှတမှု Supply နည်းနေတယ်။ စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္မဏီရှင်များ တရားခြင်း၊ မျှတခြင်းကို အရေးပေးအာရုံပြုဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းမှဘုရား ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ဘုရားဟာ တရားမျှတခြင်းနဲ့စိုးမိုးတော်မူပါတယ်။
- မတူခြားနားခြင်းဟာ သိက္ခာတစ်ခုပါ။
ဖန်ဆင်းထားသော ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကျေအေးရခြင်း
သံယံဇာတနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မြေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၆၀)မှာ အဆိုးဝါး ဆုံး ဖျတ်စီးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ စည်းပွားရေးသမားများ အာဏာ အလွဲသုံးစာသူများ ကိုယ့်ကျိုးရှာအမြတ်ထုတ်နေတဲ့အခါ ဒို့နိုင်ငံချစ်ပြည်ချစ်သူများဟာ ကိုယ့်သံယံ ဇာတကို ကာကွယ်ရမယ်။
မြစ်ရေကိုလုံခြုံစေရမယ်။ သစ်တောများကို ထိန်းသိမ်း ရမယ်။ မြေကိုခုခံပေးရမယ်။ ဘုရားပေးထားတဲ့ ဘုရားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာ ဟူသမျှနဲ့ ကျေအေး စေရမယ်။
သခင်ယေဇူးဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန့်ညားလှတဲ့တာဝန်ကြီးကို သတိပေးနေတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ဒို့ကိုအခွင့်လွတ်ပြီး ကျေအေးစေခဲ့သလို ဒို့သည်လည်းပဲ ကိုယ့်ကိုမှား မိထိခိုက်သူများစီ သွားပြီးရှာပြီ
ကျေအေးအောင်ပြုပါ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ စံနမူနာကို လိုက်ပြီး ကိုယ်ကိုနာအောင်လုပ်သူ ဒုက္ခပေးတဲ့လူ မှားတဲ့လူကို အခွင့်လွတ်ပါ။ ကိုယ်တိုင်ပဲအစပျိုး၊ စလှမ်း၊ စသွားပြီး။ အခွင့်လွတ်ပါ။ သူများလာ ဘို့စောင့်မနေပါနဲ့။
တမျိုးအားဖြင့်ပြောရရင် “ကိုယ်ကဘုရားဖြစ်စေပါ။” ကျမ်းချက်ကို နားထောင်ရ အောင်။ “အသက်ရှင်သော သူတို့သည်တဖန်၊ ကိုယ့်အလိုသို့ လိုက်၍မရှင်။ ဒို့အတွက် အသေခံပြီးမှ ထမြောက်တော်မူသောသူ၏ အလိုသို့ လိုက်၍ ရှင်စေမည်။
လူအတွေးနဲ့မတွေး ဘုရားအတွေးနဲ့တွေးရင် ဘုရားနဲ့တူဘုရားဖြစ်တယ်။ ဘယ် အချိန်မှာဖြစ်မလဲ။ကျေအေးအောင် လုပ်တက်တဲ့သူများ ဘုရားနဲ့ တူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒို့နဲ့သခင်ယေဇူးဘယ်အချိန်အတူဆုံးလဲ။ သူလုပ်တဲ့အတိုင်း ဒို့လုပ်ရင်၊ သူဟာကာလရ်ဝါရီတောင်ထိပ်မှာ ထူးခြားအံ့သြတဲ့ လက်ဆောင်မွန်ပေးခဲ့တယ်။ forgiveness အခွင့်လွတ်တယ်။ ကျေအေး စေတယ်။
အဆုံးမသတ်ခင်-လက်တွေ့ကျတဲ့အချက်လေး၊ အကြံပြုချင်တယ်။ ကိုယ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တမန်တော်သံအမတ်ဖြစ်တယ်။ အခုပေါ်ထွက်ခါစဖြစ်တဲ့- “ ပန်းစကား” နှုတ်ထွက်စကားလုံးဟာ ပန်းပွင့်ကဲ့သို့ တူနိုင်ဘို့ကြိုးစား ကြရအောင် ပန်းစကားရဲ့နှိုးဆော်မှုဟာ တပါးသူကိုတိုက်ခိုက် ဆန့်ကျင်တဲ့ စကားမျိုးကို ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချသော အဖွဲ့ဖြစ်တယ်။ ရိုးသားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတောင် ဆန့်ကျင်ဟောပြောတဲ့စကား၊ တရားကြောင့်- တခြားသူများအပေါ် အမြင်စောင်း တယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် အကြမ်းဖက်ချင်လာတယ်။ ဒါမျိုးတစ်ပါး သူတိုက်ခိုက် စကားမျိုးကိုအစိုးရက ကိုင်တွယ်ဘို့ကောင်းတယ်။ အခုထိ-ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေသေး တယ်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်- ပါစကားရဲ့ သတင်းကောင်းဟာ ကိုးကွယ် ဘာသာတိုင်း ကိုရိုသေကြဘို့၊ အကောင်းမြင်တက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာ မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကောင်းမွန် မြင့်မြတ်ကြောင်းကို ဟောပြောရမယ်။ တခြား ဘာသာကို တိုက်ခိုက်၊ ရှုတ်ချမှုတွေ ရှောင်ရှားသင့်တယ်။ တခြားဘာသာကို ရိုသေလေလေ – ကိုယ့်ဘာသာကိုပိုမွန်မြတ်စေတယ်။ လေးစားစေတယ်။
မတူခြားနားခြင်းဟာ ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်။ အန္တရာယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒို့အားလုံး ဒီမြေ၊ ဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ကြရတယ်။ မတူခြားနားခြင်းကိုလေးစားရင် ငြိမ်းသက် ခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းရလဒ်ရပါတယ်။မတူခြားနားတာကိုမုန်းတီး ဆန့်ကျင်ရင် ပြည်တွင်းစစ်နဲ့လူတွေအိုးအိမ်နေရာပျောက်ဆုံးကြရမယ်။
အနာဂတ်ရဲ့အာရုဏ်ဦးကိုမျှော်ကိုးနေတဲ့ ဒို့ရဲ့နုနယ်သေးတဲ့နိုင်ငံမှာ အမြင်ကျဉ်း၊ အမြော်အမြင်မရှိတဲ့ အဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ ပယောဂမှိုင်းထဲ မမိဘို့သတိထားရပါမယ်။
ဒို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အသစ်မှာအမုန်းတရားအတွက်နေရာမရှိ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပန်းတိုင် ဟာ- ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီသက်တန့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ မတူခြားနား ခြင်းများကိုလက်ခံကျင်းပကြရအောင် အသက်နဲ့မေတ္တာကို ရွေးကြရအောင်။